एक, दुई, तीन-सतह दर्पण शारीरिक, सूक्ष्म र मानसिक दर्पण-संसारको प्रतीक हो; एक क्रिस्टल ग्लोब, आध्यात्मिक दर्पण को।
आध्यात्मिक ऐना सृष्टिको संसार हो। मानसिक संसार, सृष्टिबाट emanation को संसार; साइकिक वर्ल्ड मिररको प्रतिबिम्ब र आफैंको प्रतिबिम्ब दर्पण गर्दछ; भौतिक संसार प्रतिबिम्ब को प्रतिबिम्ब हो।
Vol।9मे, 1909। नम्बर 2
हरेक चोटि हामी ऐनामा हेर्छौं जुन हामी अद्भुत, अद्भुत र रहस्यमय छ देख्छौं। रहस्य केवल छवि र यसको प्रतिबिम्बमा मात्र छ, तर ऐनामा नै, यसले यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने चीज, उद्देश्यले यसले कसरी कार्य गर्दछ, र त्यो प्रतीक पनि हो।
यो के हो जुन हामी एक प्रतिबिम्ब भन्छौं, यो छाया हो? होइन? तर यो एक छाया हो भने, छाया के हो? एउटा दर्पणले सेवा गर्ने तत्काल उद्देश्य र जसको लागि यो अधिकांशतः प्रयोग गरिन्छ हाम्रो पोशाकको व्यवस्थामा र हामी अरूलाई कसरी देख्छौं भनेर हेर्नको लागि हो। ऐना भ्रमको प्रतीक हो, यथार्थबाट वास्तविक भन्दा भिन्न। दर्पण शारीरिक, सूक्ष्म, मानसिक, र आध्यात्मिक संसारको प्रतीक हो।
सभ्यताको लागि आवश्यक पर्ने धेरै चीजहरू जस्तै हामी पनि ऐनालाई सरल र उपयोगी अंशको रूपमा स्वीकार गर्दछौं र तिनीहरूलाई फर्निचरको साझा अंशका रूपमा हेर्दछौं। दर्पण जहिले पनि प्राचीनहरूले उच्च सम्मान मा राखिएको छ र जादुई, रहस्यमय र पवित्र मानिन्छ। तेह्रौं शताब्दीभन्दा पहिले यूरोपमा ऐना निर्माणको कला अज्ञात थियो र शताब्दीयौंसम्म यसको निर्माणको रहस्य यसमा भएका मानिसहरूले ईर्ष्यालु ढ was्गले जोगाए। कपर, चाँदी र इस्पातलाई सबैभन्दा पहिले पोलिशमा लाएर ऐनाको रूपमा प्रयोग गरियो। पछि यो पत्ता लाग्यो कि टिन, सिसा, जस्ता र चाँदी जस्ता धातुको सम्मिश्रणको आधारमा गिलासले उही उद्देश्य प्रयोग गर्दछ। सुरुमा युरोपमा बनाइएको ऐना आकारमा सानो र महँगो थिए, सबैभन्दा ठूलो बाह्र इन्च व्यासको थियो। आजको दिनका ऐनाहरू सस्तो छन् र कुनै पनि आवाश्यक आकारमा बनेको छ।
ऐना भनेको पदार्थको, शरीरबाट, भित्रबाट, वा मार्फत, जुन प्रकाश र प्रकाशमा भएका रूपहरू प्रतिबिम्बित हुन सक्छ।
ऐना भनेको त्यो झल्किन्छ जुन कुनै कुरा जुन प्रतिबिम्बित गर्दछ राम्रोसँग ऐना भनिन्छ। सब भन्दा उत्तम दर्पण त्यो हो जुन सबैभन्दा उत्तम प्रतिबिम्बित हुन्छ। यो घुमाउँछ वा फर्कन्छ प्रकाश, वा चीजहरू जुन प्रकाशमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। ऐना झुकाउँछ, घुमाउँछ, वा फ्याँक्छ, छवि वा प्रकाशको प्रतिबिम्ब जुन छवि वा प्रकाशबाट राखिएको स्थिति वा कोणको अनुसार त्यसमा फ्याँकिन्छ।
ऐना, एउटा चीज भए पनि, धेरै भाग वा घटकहरू मिलेर बनेको हुन्छ, ती सबैलाई ऐना बनाउन आवश्यक छ। ऐनाको लागि आवश्यक भागहरू गिलास र धातु वा धातुको अमलगम हुन्।
जब गिलाससँग पृष्ठभूमि निश्चित हुन्छ, यो ऐना हो। यो दर्पण प्रतिबिम्बित गर्न को लागी तयार छ। तर ऐनामा अन्धकारमा वस्तु प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन। कुनै चीज प्रतिबिम्बित गर्न ऐनाको लागि प्रकाश आवश्यक छ।
त्यहाँ उत्तम र अपूर्ण मिररहरू छन्। उत्तम दर्पण हुनको लागि, सिसा कुनै त्रुटिबिना हुनुपर्दछ, एकदम पारदर्शी, र दुबै सतहहरू बिल्कुल समान र बराबर मोटाईको हुनुपर्दछ। अमलगामको कणहरू उही र color र गुणको हुनुपर्दछ र एक जोडिएको द्रव्यमा सँगै सुत्नुपर्दछ जुन एकै ठाउँमा र काँचमा कुनै दाग बिना फैलिएको हुन्छ। समाधान वा घटक जसले कांचको पृष्ठभूमि फिक्स गर्दछ रंगहीन हुनुपर्दछ। त्यसपछि प्रकाश स्पष्ट र स्थिर हुनुपर्दछ। जब यी सबै सर्तहरू हुन्छन् हामीसँग एउटा राम्रो ऐना छ।
ऐनाको उद्देश्य कुनै चीजलाई वास्तवमा उस्तै झल्काउनु हो। एक अपूर्ण दर्पण ठूलो पार्छ, घट्छ, विकृत हुन्छ जुन यसलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। उत्तम दर्पणले कुनै चीजलाई त्यस्तै दर्शाउँछ।
यद्यपि यो आफैमा सहज देखिन्छ, दर्पण एक रहस्यमय र जादुई चीज हो र यस भौतिक संसारमा वा चार मध्ये कुनै एक पनि विश्वमा सबैभन्दा आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ। दर्पण बिना अहंकार को लागी प्रकट संसारहरु को बारे मा सचेत हुन को लागी, वा संसार प्रकट हुन को लागी असंभव हुनेछ। यो सृष्टि, emanation, अपवर्तन र परावर्तन द्वारा unmanififest प्रकट हुन्छ। दर्पण शारीरिक दुनियामा प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित छैन। ऐना संसारको सबै मा प्रयोग गरीन्छ। मिररहरू संसारको सामग्रीको निर्माण हुन्छन् जसमा उनीहरू प्रयोग गरिन्छन्। भौतिक र सिद्धान्त जुन तिनीहरू संचालन गर्दछन् संसारको प्रत्येकमा फरक फरक छ।
त्यहाँ चार प्रकारका ऐना छन्: शारीरिक ऐना, साइकिक मिरर, मानसिक ऐना र आध्यात्मिक दर्पण। त्यहाँ यी चार प्रकारका दर्पणहरूका धेरै प्रकारहरू छन्। प्रत्येक प्रकारको ऐनाको विशेष संसार यसको भेरियन्टसँग हुन्छ, र चारै प्रकारको ऐनाको शारीरिक प्रतिनिधि हुन्छन् भौतिक संसारमा जुन उनीहरू द्वारा प्रतीक छन्।
भौतिक संसार एक सतह को ऐना द्वारा प्रतीक छ; दुई सतहहरूको साथ ऐना द्वारा सूक्ष्म संसार; मानसिक तीन सतहहरु संग एक द्वारा, जबकि आध्यात्मिक दुनिया एक सबै सतह ऐना द्वारा प्रतीक छ। एक सतह दर्पण भौतिक संसारसँग मिल्दोजुल्दो छ, जुन एक पक्षबाट मात्र देख्न सकिन्छ। वर्तमान, भौतिक पक्ष। दुई-सतह दर्पणले सूक्ष्म संसारलाई सुझाव दिन्छ, जुन केवल दुई पक्षबाट मात्र हेर्न सकिन्छ: त्यो विगतको हो र जुन अहिले छ। तीन-सतह दर्पणले मानसिक संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन तीन पक्षबाट हेराई र बुझ्न सकिन्छ: भूत, वर्तमान र भविष्य। सबै सतह दर्पण आत्मिक संसारको लागि खडा हुन्छ जुन कुनै पनि ठाउँबाट जानिन्छ र ज्ञात हुन्छ र जुन भूत, वर्तमान र भविष्य अनन्त अस्तित्वमा मर्दछ।
एउटा सतह एक विमान हो; दुई सतहहरू कोण हुन्; तीन सतहहरू एक प्रिज्म गठन; सबै सतह, एक क्रिस्टल गोला। यी शारीरिक प्रतीकको लागि शारीरिक प्रतीक हो, मानसिक या सूक्ष्म, मानसिक र आध्यात्मिक संसार।
भौतिक प्रतिबिम्ब को प्रतिबिम्ब को दुनिया हो; सूक्ष्म, प्रतिबिम्ब को दुनिया; मानसिक, emanation को संसार, प्रसारण, अपवर्तन; आध्यात्मिक, विचारहरूको संसार, अस्तित्व, सुरुवात, सृष्टि।
भौतिक संसार अरू सबै संसारको ऐना हो। संसारका सबै भौतिक संसार द्वारा प्रतिबिम्बित छन्। अभिव्यक्ति को क्रम मा, भौतिक दुनिया आक्रमणकारी प्रक्रिया मा र विकासवादी प्रक्रिया को शुरुवात मा पुगेको सब भन्दा कम बिन्दु हो। प्रकाशको अभिव्यक्तिमा, जब प्रकाश तल्लो तल्लो बिन्दुमा पुग्छ, फर्कन्छ र उचाइ तिर फर्कन्छ जुन माथिबाट खसेको थियो। यो कानून महत्त्वपूर्ण छ। यसले आक्रमकता र विकासको विचार प्रतिनिधित्व गर्दछ। कुनै पनि कुरा विकसित हुन सक्दैन जुन संलग्न छैन। कुनै पनि प्रकाश ऐनामा प्रतिबिम्बित गर्न सकिदैन जुन ऐनामा फ्याँकिएको छैन। प्रकाशको रेखाले जुन ऐनामा प्रहार गर्दछ उही कोण वा कर्भमा प्रतिबिम्बित हुन्छ जुन यसले ऐनामा प्रहार गर्दछ। यदि 45 डिग्रीको कोणमा ऐनामा प्रकाशको रेखा फ्याक गरियो भने त्यो त्यो कोणमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र हामीले केवल कोणलाई मात्र थाहा पाउँदछौं जुन प्रकाशलाई ऐनाको सतहमा फ्याँकिएको छ भने कोणलाई भन्न सक्षम हुन। जुन यो प्रतिबिम्बित हुनेछ। अभिव्यक्ति को रेखा अनुसार आत्मा जो पदार्थमा सम्मिलित छ, पदार्थलाई आत्मामा विकसित गरिनेछ।
भौतिक संसारले आक्रमणको प्रक्रियालाई रोक्छ र क्रमशः क्रमशः विकासको रेखामा समावेश छ, जुन कि ऐनामा पछाडि फर्कन्छ जुन त्यसमाथि फ्याँकिएको प्रकाश प्रतिबिम्बित गरेर फिर्ता हुन्छ। केहि भौतिक ऐना भौतिक वस्तुहरू मात्र प्रतिबिम्बित गर्दछ, वस्तुहरू हेरिरहेको गिलासमा देखिएको रूपमा। अन्य शारीरिक दर्पण इच्छा, मानसिक वा आध्यात्मिक संसारबाट प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्दछ।
शारीरिक दर्पण बीचमा पत्थरहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ, जस्तै गोमेद, हीरा र क्रिस्टल; धातुहरू, जस्तै फलाम, टिन, चाँदी, पारा, सुन र amalgams; काठ, जस्तै ओक, महोगनी र आबनूस। जनावरहरूको शरीर वा अ organs्गहरूका बीचमा आँखाले विशेष गरी त्यसमा फ्याँकेको प्रकाश झल्काउँछ। तब त्यहाँ पानी, हावा र आकाश छ, ती सबैले प्रकाशलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, र प्रकाशहरू द्वारा देखिने वस्तुहरू।
शारीरिक दर्पणको विभिन्न रूपहरू छन्। त्यहाँ धेरै पक्षीय र beveled ऐना छन्। त्यहाँ अवतल र उत्तल, लामो, फराकिलो र साँघुरो ऐना छन्। त्यहाँ मिररहरू छन् जसले घृणित प्रभावहरू उत्पादन गर्दछ, जसले तिनीहरूको सामना गर्नेका सुविधाहरू विकृत गर्दछ। यी विभिन्न प्रकारका ऐनाले भौतिक संसारका पक्षहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन अन्य संसारहरूको ऐना हो।
संसारमा के हेर्छ त्यो संसारमा उसले के गर्छ भन्ने झल्काउँछ। संसारले उसले सोच्दछ र गर्छ के प्रतिबिम्बित गर्दछ। यदि उसले ग्रिन्स गर्दछ र यसमा आफ्नो मुट्ठी हल्लाउँछ, यसले उसलाई पनि त्यस्तै गर्नेछ। यदि ऊ हाँस्छ भने, परावर्तन पनि हाँस्दछ। यदि उसले यसमा अचम्मित पार्छ भने, उसले प्रत्येक रेखामा अचम्मको चित्रण देख्दछ। यदि उसले दु: ख, क्रोध, लोभ, शिल्प, निर्दोषता, धूर्तता, पागलपन, छल, स्वार्थ, उदारता, प्रेम महसुस गर्दछ भने, उसले यी अधिनियमहरू देख्छ, र उसलाई फर्केर, संसारबाट। भावनाहरूको हरेक परिवर्तन, त्रास, आनन्द, डर, सुखद, दयालुता, ईर्ष्या, घमण्ड, प्रतिबिम्बित छ।
संसारमा हामीसँग आउने सबै मात्र यो हो कि हामीले गरेका थियौं वा संसारमा के गरेका छौं। यो धेरै घटनाहरू र घटनाहरूको विचारमा अनौंठो र असत्य जस्तो देखिन सक्छ जुन आफ्नो जीवनको अवधिमा एक व्यक्तिमा आइपर्दछ जुन उहाँलाई कुनै पनि विचार वा कार्यहरू द्वारा योग्य वा जोडिएको छैन जस्तो देखिन्छ। केहि विचारहरू जस्तै जुन नयाँ छन्, यो अनौंठो हो, तर असत्य होइन। ऐनाले यो कसरी सच हुन सक्छ भनेर वर्णन गर्नेछ; कानुनसँग यसको अनौंठो कुरा हराउँनु अघि नै उनीहरू परिचित हुनुपर्दछ।
ऐनाको साथ प्रयोग गरेर कसैले अनौंठो घटनाको सिक्न सक्छ। दुई ठूला दर्पणहरू राख्नुहोस् ताकि तिनीहरू एक अर्कालाई समेट्नुहोस् र कुनै एकलाई ऐनामा एउटा हेराइ दिनुहोस्। उसले आफैंको प्रतिबिम्ब देख्दछ जुन उसले सामना गरिरहेको छ। उसको प्रतिबिम्ब को प्रतिबिम्ब हेरौं जुन उसले पछाडि ऐनामा उसले देख्छ। उसको अगाडि ऐनामा फेरि हेरौं र ऊ आफैंको पहिलो प्रतिबिम्ब को परावर्तनको रूपमा देख्नेछ। यसले उसलाई अगाडि दृश्यको दुई प्रतिबिम्ब र आफ्नो पछाडिको दुई दृश्य देखाउँदछ। ऊ यससँग सन्तुष्ट नहोस्, तर अझै टाढा हेर्नुहोस् र उसले अर्को प्रतिबिम्ब देख्नेछ र अर्को र अर्को। जतिसुकै ऊ अरूलाई हेर्ने बित्तिकै ऊनीहरूले देख्न सक्छ, यदि ऐनाको आकारले अनुमति दिन्छ भने, जब सम्म उसले आफैंको प्रतिबिम्ब देख्न सक्छ टाढा टाढासम्म आँखा पुग्न सक्छ, र उसका प्रतिबिम्बहरु लाईन को रेखा जस्तै देखिन्छ लामो सडकमा तन्काउँदासम्म तिनीहरू अब विवेकी हुँदैनन् किनकि आँखा टाढासम्म देख्न सक्दैनन्। हामी ऐनाको स increasing्ख्या बढाउँदै शारीरिक चित्रणलाई अगाडि बढाउन सक्दछौं ताकि चार, आठ, सोह्र, बत्तीस, जोडीमा र एक अर्काको बिरूद्ध हुनेछ। त्यसो भए रिफ्लेक्सको संख्या बढाइनेछ र प्रयोगकर्ताको अगाडि र पछाडि दृश्य मात्र हुनेछैन, तर दाहिने र देब्रेपट्टि र बिभिन्न मध्यवर्ती कोणबाट उसको फिगर देख्नुहुनेछ। दृष्टान्त अझ अर्को मिरर, फ्लोर, सिलि। र चार भित्ताहरू बाट बनेको मिररहरू छन् र जसको कुनामा मिररहरू सेटअप गरिएको छ कोठा बाट बनेको हुन सक्छ। यो अनिश्चित कालको लागि जारी हुन सक्छ। तब प्रयोगकर्ता एक चक्रव्यूहमा हुनेछ, आफूलाई माथि र तलबाट र अगाडि र पछाडि, दायाँ र बायाँबाट देख्नेछ; सबै कोण बाट र प्रतिबिम्ब को एक गुणा में।
केहि कुरा जुन हामीसँग हुन्छ वा केहि अरू व्यक्तिको कार्यले हामीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन हामी आजको दिनमा संसारमा प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ वा गरिरहेका छौं भन्ने कुराको विपरित जस्तो देखिन्छ, र हामी यसलाई वर्तमान दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा, हामी जडान देख्दैनौं। जडान अवलोकन गर्न हामीलाई अर्को ऐनामा चाहिन सक्छ, विगतलाई दर्शाउँछ। तब हामी यो देख्नेछौं कि आज हाम्रो अगाडि जो फालिएको छ त्यो हाम्रो पछाडिको चित्रण हो। ती कारणहरू वा स्रोतहरूमा पत्ता लगाउन नसकिने कुरा, विगतको समयदेखि क्रियाकलापको वर्तमानमा फ्याँकिएका प्रतिबिम्बहरू हुन्, ती कार्यहरू जुन अभिनेता, दिमागले गरेका थिए, यदि यस जीवनमा यस शरीरमा छैनन् भने, अर्को शरीरमा अघिल्लो जीवन
परावर्तनको प्रतिबिम्ब हेर्न, साधारण व्यक्तिको लागि एक भन्दा बढी ऐना हुनु आवश्यक हुन्छ। प्रयोगको लागि आवश्यक सुविधा प्रकाश हुनु हो जुन उनको फाराम र यसको कार्यहरू प्रतिबिम्बित गर्न अनुमति दिनेछ। त्यस्तै प्रकारले यो पनि आवश्यक छ कि जसले आफ्नो वर्तमान रूप र यसको कार्यहरू बिगतका अन्य रूपहरू र उनीहरूको कार्यहरू बीचको सम्बन्ध देख्दछ, र साथै संसारको अन्य रूपहरूसँग आजको दिनको रूप लिनको लागि दिन र दिमागको प्रकाशमा यसलाई समात्नुहोस्। रूप दिमागको प्रकाशमा प्रतिबिम्बित हुने बित्तिकै, दिमागको प्रकाशमा यो प्रतिबिम्ब, जब यो प्रकाश आफैमा सक्रिय हुन्छ, बारम्बार प्रतिबिम्बित हुन्छ। प्रत्येक परावर्तन अघिल्लो प्रतिबिम्ब को एक निरन्तरता हो, प्रत्येक पछिल्लो फारम को एक रूप। तब सबै रूपहरू र प्रतिबिम्बहरू जो एक व्यक्तिगत दिमागको प्रकाशमा आउँदछन्, यसको अवतारहरूको श्रृंखलाको माध्यमबाट, स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ र शक्ति र समझको साथ अनुमोदन दिमागको सामर्थ्यको अनुपातमा हेर्ने, भेदभाव गर्ने र भेदभाव गर्न वर्तमान, विगत र तिनीहरूको जडानहरू।
एक दर्पण को लागी आफ्नो प्रतिबिम्बहरु को लागी आवश्यक छैन यदि उसले आफ्नो दिमागमा यसको प्रकाशमा प्रतिबिम्बित गरेर प्रयोग गर्न सक्छ भने। जति धेरै ऐना उसले सेट गर्न सक्दछ र जसमा उसले आफ्ना प्रतिबिम्बहरू प्रतिबिम्बित भएको, दुईगुणा र अनिश्चित कालमा संख्यामा बढ्दो देख्दछ, यति धेरै उसले ऐना बिना देख्न सक्छ, यदि उसले उसको दिमागमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्षम छ भने। उसले केवल उसको दिमागमा उसको शरीरको प्रतिबिम्ब मात्र देख्न सक्दछ, तर ऊ अहिलेको जीवनसँग सम्बन्धित सबै चीजहरूको सम्बन्धमा देख्न सक्छ र त्यसले थाहा पाउँदछ कि कुनै कुरा गर्दैन। हुन सक्छ तर त्यो जुन उसको जीवनमा कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित छ विगतका जीवनका कार्यहरू, वा यस जीवनमा अन्य दिनहरूको प्रतिबिम्बको रूपमा।
संसारमा सबै कुरा, एनिमेट वा निर्जीव तथाकथित, उहाँ प्रतिबिम्ब वा मान्छे को प्रतिबिम्ब को आफ्नो विभिन्न पक्षहरु मा प्रतिबिम्ब हो। ढु various्गा, पृथ्वी, माछा, चरा, र जनावरहरू उनीहरूको बिभिन्न प्रजाति र रूपहरू, बाहिर चित्रण र मानव विचार र शारीरिक इच्छा शारीरिक प्रतिबिम्ब हो। अन्य मानव जातजातिहरु, उनीहरुका सबै जातीय भिन्नताहरु र विशेषताहरु र असंख्य व्यक्तिगत भिन्नताहरु र likesesses मा, मानिस को अन्य पक्ष को यति धेरै प्रतिबिम्ब हो। यो कथन एक व्यक्तिलाई असत्य जस्तो लाग्न सक्छ जो आफैं र अन्य प्राणीहरू र चीजहरू बीचको सम्बन्ध देख्न सक्दैन। यो भन्न सकिन्छ कि ऐनाले केवल प्रतिबिम्ब दिन्छ, जुन प्रतिबिम्बित वस्तुहरू प्रतिबिम्बित हुँदैनन्, र, ती वस्तुहरू उनीहरूको प्रतिबिम्ब भन्दा भिन्न छन्, र यो विश्वमा वस्तुहरू स्वतन्त्र सृजनाको रूपमा अस्तित्वमा छन्। कि विश्व मा वस्तुहरु का आयाम छ, लम्बाई, चौड़ाई र मोटाई, जबकि मिरर मा देखिने वस्तुहरु सतह प्रतिबिंब हो, लम्बाई र चौड़ाई, तर मोटाई छैन। यसबाहेक, कि ऐनामा प्रतिबिम्ब हटाउन अघि वस्तुको रूपमा छिट्टै हराउँदछ, जबकि जीवित प्राणीहरू संसारमा छुट्टै अस्तित्वहरूको रूपमा सर्न जारी राख्छन्। यी आपत्तिहरूमा यसलाई जवाफ दिन सकिन्छ कि कुनै चीजको उदाहरण भनेको यसले वर्णन गर्ने कुरा मात्र होइन, यद्यपि यससँग यसको समानता छ।
हेरिरहेको गिलासतिर हेर्नुहोला। कांच देखिएको छ? वा पृष्ठभूमि? वा जुन सँगै पृष्ठभूमि र गिलास समात्छ? यदि त्यसो हो भने प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन, तर एक indistinct तरीकामा मात्र। अर्कोतर्फ, चित्रको अनुहार र रूपरेखा स्पष्ट देखिन्छ? यदि त्यसो हो भने न त शीशा, यसको पृष्ठभूमि, न त ती दुई जोडी नै देखिन्छ। परावर्तन देखिएको छ। परावर्तन यो कसरी प्रतिबिम्बित संग जोडिएको छ? परावर्तन र यसको वस्तु बीच कुनै जडान देख्न सकिदैन। यो, एक प्रतिबिम्ब को रूप मा, यो को प्रतिबिम्बित जो वस्तु को रूप मा अलग छ।
फेरि, हेर्ने शीशाले कुनै चीजको पक्षहरूको संख्या देखाउँदछ जुन यसमा पर्दा उठाइन्छ। अरूले फिगरमा देख्न सक्ने सबै कुरा ग्लासमा परावर्तनद्वारा देख्न सकिन्छ। हामी केवल हेर्ने गिलासको कुनै चीजको सतह देख्छौं; तर अब संसारमा कसैलाई देखिएको छैन। केवल सतहमा देखा पर्ने मात्र देख्न सकिन्छ, र जब आन्तरिक सतहमा आउँछ, तब मात्र यो विश्वमा देखिन्छ। त्यसो भए यो हेर्ने गिलासमा पनि देखिने छ। यसको गहिराई वा मोटाई को विचार निश्चित रूपमा र स्पष्ट देखिन्छ कुनै पनि वस्तु मा अलग यो अलग देखिन्छ को रूप मा स्पष्ट छ। दूरी हेर्दै गिलास मा देखीन्छ साथ साथै यो यो बिना महसुस हुन सक्छ। अझै हेरिरहेको गिलास सतह मात्र हो। संसार पनि त्यस्तै हो। हामी बाँचिरहेका छौं र पृथ्वीको सतहमा हिंड्छौं जस्तै हेराई ग्लासमा वस्तुहरू।
तथ्या and्क र रूपहरू जुन संसारमा यताउता जान्छ, तिनीहरू आफैंमा अवस्थित हुन्छन् र हेर्ने गिलासमा तिनीहरूको प्रतिबिम्बभन्दा फरक हुन्छन्। तर यो केवल समयको लम्बाई हो र वास्तविकतामा होईन। पृथ्वीको सतहमा सर्ने रूपहरू केवल प्रतिबिम्बहरू हुन्, जस्तो कि दृश्य गिलासमा। छवि जुन उनीहरूले प्रतिबिम्बित गर्छन् सूक्ष्म शरीर हो। त्यो देखिएको छैन; केवल परावर्तन देखिएको छ। संसारमा यी प्रतिबिम्बित रूपहरू तिनीहरू लामो समय सम्म चलिरहन्छन् जुन छवि उनीहरूसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ। जब छवि छोडिन्छ, फाराम, पनि, अदृश्य हुन्छ, जस्तै हेर्दै गिलासमा। भिन्नता केवल समयमै हो, तर सिद्धान्तमा होइन।
प्रत्येक व्यक्ति र other्ग, फिगर र सुविधाहरूमा प्रत्येक व्यक्तिसँग फरक हुन्छ, तर डिग्रीमा मात्र। मानव समानता सबैले प्रतिबिम्बित गर्दछ। नाक नाक हो कि यो ठोकरिएको वा पोइन्ट, फ्ल्याट वा गोलाकार, सूजिएको वा पातलो, लामो वा छोटो, धब्बा वा चिल्लो, रूख वा फिक्का; आँखा एउटा आँखा हो कि यो खैरो, निलो वा कालो, बदाम वा बल आकारको छ। यो सुस्त, तरल, अग्निमय, पानीदार हुन सक्छ, अझै पनि यो आँखा हो। कान यसको अनुपातमा हात्तीन वा सानो हुन सक्छ, ट्रेसि and र रंगहरूसहित समुद्रको खोल जस्तो नाजुक वा फिक्का र फिक्का कलेजोको टुक्रा जत्तिकै भारी, तर यो एउटा कान हो। ओठहरू कडा, कोमल वा तीर घुमावदार रेखा र रेखाहरू द्वारा देखाउन सकिन्छ; मुख अनुहारमा कुनै नराम्रो वा मोटो काटिएको रूपमा देखा पर्न सक्छ; यद्यपि यो एक मुख हो, र यसले दिक्क लागेका देवताहरूलाई खुशी पार्न वा तिनीहरूका भाइहरू, शैतानहरूलाई डराउन सक्छ। सुविधाहरू मानव हुन् र यति धेरै भिन्नताहरू प्रतिनिधित्व गर्दछन् र मानिसको धेरै पक्षीय मानव प्रकृतिको प्रतिबिम्ब।
मानिस मानव को यति धेरै प्रकार वा चरणहरू हुन् जुन पक्षको प्रतिबिम्ब वा मानवताका विभिन्न पक्षहरूको भीडमा दर्साइएको छ। मानवता एक पुरुष, पुरुष-महिला, जो देखिएको छैन, जसले आफैंलाई यसको दुई पक्षीय प्रतिबिम्ब बाहेक देख्दैन, पुरुष र महिला भनिन्छ।
हामीले शारीरिक ऐनामा हेराएका छौं र केहि चीजहरू देख्छौं जुन उनीहरूले दर्साउँछन्। अब हामी मानसिक दर्पणहरु लाई विचार गरौं।